IDenmark iphelisa ZONKE izithintelo ze-COVID-19 nge-10 kaSeptemba
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseDenmark zokuPhula » IDenmark iphelisa ZONKE izithintelo ze-COVID-19 nge-10 kaSeptemba
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseDenmark zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Agasti 27, 2021
IDenmark iphelisa yonke imiqobo ye-COVID-19 nge-10 kaSeptemba
Ukwahlulahlulwa kungekudala kwe-COVID-19 njengesoyikiso esibi kwezentlalo kwavumela abasemagunyeni baseDenmark ukuba banyanzelise izithintelo ezinje ngokunyanzelwa kokunxiba imaski kunye 'neemfuno zecoronon,' kunye nokuvalwa kweendibano ezinkulu kweli lizwe.
IDenmark iyeke ukwahlula intsholongwane "njengesifo esibi ekuhlaleni".
IDenmark iyakususa yonke imiqobo enxulumene nobhubhane ngoSeptemba.
Iziphumo ezincumisayo ziziphumo "zolawulo lobhubhane olomeleleyo".
Amagosa ezempilo eDenmark akhuphe ingxelo namhlanje evakalisa ukuba bathathe isigqibo sokuyeka ukubeka i-COVID-19 "njengesifo esibi ekuhlaleni," kuba baphantsi kolawulo. Isigqibo sithetha ukuba nasiphi na isiseko esisemthethweni sezithintelo ezinxulumene nobhubhane siyayeka ukubakho kwaye ke yonke imiqobo iya kuphakanyiswa nge-10 kaSeptemba.
"Ubhubhane luphantsi kolawulo, sinerekhodi yamazinga aphezulu okugonya," sifunde ingxelo.
Ngelixa iziphumo ezilungileyo ziziphumo "zolawulo olomeleleyo lwesifo," imigaqo ekhethekileyo ethe yaziswa kuyo Dominikha ukulwa nentsholongwane ebulalayo akusayi kubakho endaweni yayo ukuqala nge-10 Septemba, ngokwesibhengezo esisemthethweni.
Ukwahlulahlulwa kungekudala kwe-COVID-19 njengesoyikiso esibi kwezentlalo kwavumela abasemagunyeni ukuba banyanzelise izithintelo ezinje ngokunyanzelwa kokunxiba imaski kunye 'neemfuno zecoronon,' kunye nokuvalwa kweendibano ezininzi eDenmark.
"Urhulumente uthembisile ukuba akazukubambelela kumanyathelo amade kunokuba bekuyimfuneko, kwaye sikhona ngoku," sitshilo isitatimende, songeza ukuba akukho mfuneko ikhethekileyo iyakudingeka nakwimicimbi ephambili yoluntu, kananjalo malunga nokufikelela kwilizwe. Ubusuku bobusuku. Nangona kunjalo, abasemagunyeni banelungelo lokuqinisa izithintelo ezinxulumene ne-COVID “ukuba ubhubhane uphinde wosongela imisebenzi ebalulekileyo eluntwini.”
"Umsebenzi onzima awukapheli, kwaye ukujonga kwihlabathi kubonisa ukuba kutheni kufuneka siqhubeke siphaphile," UMphathiswa wezeMpilo eDenmark UMagnus Heunicke ubhale kuTwitter, ngelixa encoma nelizwe lakhe "ngokulawula ubhubhane".
IDenmark yayiphakathi kwamazwe okuqala ukuba phantsi kwezithintelo ezinxulumene nobhubhane xa ipalamente yayo yapasisa isigunyaziso sokuchaza esi sifo njengesisisongelo esibi kuluntu ngo-Matshi 2020. , kwaye yomelezwa kulo lonke ubhubhane. Ukuphela kuka-Agasti, ngaphezulu kwama-70% abemi belizwe babegonyiwe ngokupheleleyo. IDenmark ibhalise ngaphezulu kwama-342,000 amatyala ale ntsholongwane, nangabantu abangaphezulu kwama-2,500 XNUMX ababhubha kuyo.
Ngaba i-Zombie Apocalypse ikwi-Horizon?
Izongezo zeMpilo yoBuchule: Ngoku uYeka ukuncipha kwengqondo?
Izidubedube ezinobundlobongela ze-COVID-19 zasasazeka ukusuka eGuadeloupe ukuya ...
Iintlungu zokutshixwa kweThailand kufuneka ziyeke, amashishini akhala
Umphathi we-KISS uGene Simmons: I-Anti-vaxxers lutshaba!
Abantu baseLondon bazimisele ukukhokela ukubuyisela uhambo lokuzonwabisa kulo nyaka uzayo
Ukukhangelwa kweCalifornia Surge njengoko iUS iphinda ivula ...
Entsha Düsseldorf, Birmingham, Helsinki, Liverpool...
IBoeing 777X ifika eDubai kwi2021 Dubai Airshow
I-Bahamas-based Coral Vita iphumelele iNkosana eQhelekileyo ...
Ihotele yaseSeverin: Ethandwa kakhulu ngabakhweli kwi-300 yonke imihla...
UShishino lweKit yeSidlo luNyusela phezulu kwiibhiliyoni
Abaqeshwa baseKaiser bamiselwe uGqibo Ngomso ngentsimbi yesi-7 AM:...
U-Israyeli Uvula kwakhona kubahambi bamazwe ngamazwe
IHG, uHilton kunye noMarriott baxhomekeke kwiPiramidi yeBenchmark...
Iintlungu eziNgaphantsi eziNgapheliyo: INyaniso yokuqala eNtsha ebonakalayo...
I-Uganda Airlines New Inflight Menu: Iintethe?
Iilali njengamashishini evula indlela eya ...
IJapan ngoku ivaliwe kubo bonke ngaphandle kwabemi Novemba 30, 2021
Ngelixa i-Afrika ikhathazekile e-UK nase-Europe ngokubanzi kunye ne-United States ngokuvala imida yayo kumazwe akuMazantsi e-Afrika, i-Israel kunye ne-Japan ngoku ihambela phambili kwaye ivala onke amazwe angaphandle.
Iinqwelomoya ezintsha ezisuka eAntigua ukuya eBarbados naseProvidenciales kwi-interCaribbean Airways ngoku Novemba 30, 2021